Muqdisho: Ardayda ayaa dhibaato waxaa ku haya isticmaalka xashiishad cusub (Taabuu) – Radio Daljir
Muqdisho: Ardayda ayaa dhibaato waxaa ku haya isticmaalka xashiishad cusub (Taabuu)
Oktoobar 31, 2018 5:17 b 0
Ardayda wax ka barta jaamacadaha iyo dugsiyada magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo badanaya isticmaalkooda nooc ka mid ah daroogada oo laga keeno dalka Indiya, taasi oo la sheego inay xasuusta ay soo celiso xiliyada imtixaanaadka.
Tubaakada Taabuuga ayaa kulan looga hadlayay waxaa lagu qabtay shalay magaalada Muqdisho, waxaana ka qaybgalay qaybaha bulshada rayidka ee gobolka Banaadir.
Xoghayaha xarrunta talo soojeedinta Soomaaliya Ambasador Diinaari ayaa oo ka qaybgaly kulanka ayaa waxaa uu sheegay daroogadan inay dhibaato ku hayso bulshada, taasi oo ay ganacsato Soomaaliyeed kasoo dejiyaan dekedda Muqdisho.
Ambasadorka ayaa sheegay inkastoo dowladda ay dhowaan sheegtay inay mamnuucayso dekedda in laga soo dejiyo, haddana kunteenar uu ka buuxo dowladda ay ku canshuurayso dekedda Muqdisho.
“Runtii waxa ugu nasiibdaran oo macalimiinta qaarkood inoo sheegeen in Gabadhaha Jaamacadaha dhigta ay si caadi ah u isticmaalaan Taabuuka,hadda Dekadda Muqdisho waxa yaalla Kunteenar ay dowladdu dooneyso inay Canshuurto waaan uga digeynaa ayuu yiri Ambasadoir Diinaari ahna Xoghayaha Xarunta tala soo jeedinta Somaaliyeed.
Jubaland oo dowladda uga digtay faragalin siyaasadeed (dhegayso)
Duqa degmada Garoowe Cabdi Bare ” Gaadiidka kuxaniban Kaantaroolka Garoowe iyaga ayaa diiday in ay gudbaan (dhegayso )